အီတလီအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေကာစီနိုအပိုဆု။ အီတလီရှိ4BEST လောင်းကစားရုံ! - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးကလပ်ဗင်းနစ်, အီတလီအတွက်နေ့၏အလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါဟာ 1638 နှင့်ရှည်လျားသောမှာဗင်းနစ်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြို့နောက်ဆုံးအချို့တစ်လောကလုံးမျက်စိဆှဲခဲ့သညျ။ အဘယ်အရာကိုဗင်းနစ်၏ကလပ်ဒါထူးခြားသောကလောင်းကစားဝိုင်းကလပ် city.For ထင်ရှားအကြောင်းပြချက်တစ်လျှောက်လုံးနေရာတိုင်းထွက်ပြန့်နှံ့နေသည်, ထိုဗင်းနစ် clubhouse ရိုးရှင်းစွာသူတို့က၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကြီးထွားဖို့လိုအပ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတခုတခုအပေါ်မှာနောက်ထပ်တောင်ပံလီဆယ်နိုင်ဘူးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အားငါဂတ်စ်သင်တန်း ယူ. ရိုးရှင်းစွာအနီးအနားမှာအလုပ်လုပ်နေဝယ်ယူပါကပေါက်ကွဲထိုနောက်မှအဟောင်းကလပ်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အခြားဌာနခှဲအစုဝေးသို့သော်ကြောင့်ဗင်းနစ်၌ပြစ်မှားမိရဲ့ပုံကိုမဖြစ်နိုင်ပါတယ်တွက်ဆ။ သင်သည်အခြားအဆောက်အဦးအချည်းနှီးသောတက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်လိုအပ် - နှင့်အဆောက်အဦးမြို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာ shoreline အနီးလျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ် - သောဗင်းနစ်ကလပ်သုံးခုထူးခြားတဲ့ဒေသများပေါ်တွင်ဖြန့်အဘယ်ကြောင့်နောက်ကွယ်မှရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် မြို့တော်။
ဗင်းနစ်ကာစီနို - ကာစီနို LIDO
လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်က de veniceIn နှစ်ဆယ်ရာစု, ဗင်းနစ်ကာစီနို၏ Lido အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတည်းခိုခန်းရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ beachfront အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတူနှစ်လယ်ပိုင်းသုံးဆယ်၏ဆင်တူတဲ့ကြင်နာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဦးတည်းရှိပြီးအရာရာကိုနေသော်လည်း, (Lido shoreline များအတွက်အီတလီဖြစ်ပါတယ်) ရုံ shoreline အားဖြင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ shoreline ကလပ်ဟိုတယ် Excelsior နှင့် Des Bain ဥပမာ, အချို့သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ် inns ဖွငျ့ဝိုငျးနှင့်တက်ယခုနှစ် 2000 သည်အထိဒီဗင်းနစ် Gambler များ၏နှောင်းပိုင်းကနွေဦးအိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက, ထိုလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ဇိမ်ခံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြုံနေရယခုနေစဉ်ရှည်လျားသောအဘို့ကိုပိတျထားခဲ့သညျ, သေးသောကြောင့်ဤမျှဝေးလံသောမဟုတ်အနာဂတ်တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗင်းနစ်ကာစီနို -, CA '' VENDRAMIN CALERGI
ကလပ်က de ဗင်းနစ် Ca'Vendramin CasinoIn ကို '50s, ထိုတူးမြောင်း Grande ကာစီနိုနျဌာနခှဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ Doge က 'လက်ရာမြောက်သောနှင့်ရွေးချယ် Doge ရဲ့နန်းတော်, အဗင်းနစ်၏အဆိုပါ Doge ယခင်အဖြစ်ရစ်ချတ် Wagner, ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာများ၏ယခင်လူနေမှုအစီအစဉျတှငျတာဝနျရှိထားပြီး ca' 'အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပြောကြားခဲ့ကြသည် Vendramin Calergi,' ။
ca '' Vendramin ဗင်းနစ်ရဲ့ focal လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည်နှင့်မြို့၏နိယာမပြွန်အပေါ်တည်ရှိသည်။ ဘေးဖယ်ကာထူးခြားသောဂိမ်းနောက်ခံကနေ, ဒီလောင်းကစားဝိုင်းကလပ် function ကိုအစားအစာများထည့်သွင်းထားတဲ့ဝိဇ္ဇာအတတ်အားလူမှုရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ထောက်ခံပါတယ်, ဥယျာဉ်များနှင့်အခါသမယအတွက်ပြသထားတယ်ဥပမာ, ဖော်ပြကခုန်များနှင့်လက်ရာပုံပေါ်ပါတယ်။ အရပျကိုအစဉ်အမြဲရေပေါ်မှာတင်သောတစ်မြူဆိုင်းသောမိုဃ်းတိမ်အဖြစ် '' Vendramin လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ပုံဖော်ခဲ့သူအနုပညာရှင်ဂါဘရီအဲက D'Annunzio အားဖြင့် deified ခဲ့သည်။
ဗင်းနစ်ကာစီနို -, CA '' NOGHERA
ca '' Noghera လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်က de veniceIn နှောင်းပိုင်း '' 90s သည်ဗင်းနစ် clubhouse မှလတ်တလောချဲ့ထွင်အထွေထွေလူဦးရေမှတက်ဖွင့်လှစ်။ ca '' Noghera က၎င်း၏ဖောက်သည်အမေရိကန်မတူကွဲပြားခြင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုမူလတန်းအီတလီ clubhouse ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကလပ်အထူးသဖြင့်မြို့အတွင်းအခြားလောင်းကစားကလပ်နဲ့မတူဘဲအတွက်အလွန်ပေါ့ပေါ့နှင့်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်တက် entirety ခြင်းငှါ၎င်း, သငျသညျဗင်းနစ်၏အလောင်းအစားလူ့အဖွဲ့အစည်းကြုံတွေ့ရဖို့လိုအပ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်သင်အားလုံး၎င်း၏စိတ်ဝင်စားဖို့အယူခံအတူသုံးကွဲပြားဒေသများမှာရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ un'emozione infinita, သို့မဟုတ် 'ချိုးခံစားမှု': တိုင်းတစ်ခုတည်းဘာသာစကား Venetian clubhouse တဦးတည်းဆောင်ပုဒ်အောက်မှာစုဆောင်းနေကြသည်။ ကအစွန်းနှင့်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်တဲ့ရောစပ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဗင်းနစ်၏ကာစီနိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောနှောများအတွက်ရလဒ်ချိုးခံစားချက်အဖြစ်ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင်ကဘာသာစကား Venetian clubhouse မဆိုထည့်သွင်းဖို့ 18 မဆိုမှုနှုန်းမှာအေပျအသက်ဖြစ်ရမည်, သင်တသမတ်တည်းသိသိသာသာ ID ကို-card ကိုသရုပ်ပြဖို့စွမ်းရည်ရှိသင့်ပါတယ်။ ဘေးဖယ်နှောင်းပိုင်းနွေဦးကြားတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းသောအခုအချိန်မှာပိတ် Lido ကလပ်ကနေ, ရှိသမျှလောင်းကစားကလပ် 2.30 ရက်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ပိတျထားရှိနေဆဲသည့်အခါ 3.00 ခရစ္စမတ် မှလွဲ. ထိုရက်သတ္တပတ်၏ကြီးစွန်းပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအမှတ်သည်အထိဖွင့်ထားကြသည်။ အပိုတာဝန်ခံ€5ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါးတားပိုလိုကာစီနိုမှာ 60 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
170 အခမဲ့ MoonBingo ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
OkScratchcards ကာစီနိုမှာ 145 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
35 အခမဲ့ကားလ်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
65 အခမဲ့ Optibet ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
45 Mybet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
95 အခမဲ့ Soartan ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
PlayFrank ကာစီနိုမှာ 130 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
ဘိုဟီးမီးယားကာစီနိုမှာ 90 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
35 အခမဲ့ Tipbet ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
75 NorgeVegas ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Bet140 ဂတ်စ်ကာစီနိုမှာ 365 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
75 အခမဲ့ iw ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
TouchLucky ကာစီနိုမှာ 30 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
GrandGames ကာစီနိုမှာ 130 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
MarathonBet ကာစီနိုမှာ 175 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
45 အခမဲ့ Sverige Automaten ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
BlingCity ကာစီနိုမှာ 65 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
NorgeVegas ကာစီနိုမှာ 140 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
Suomi ဂတ်စ်ကာစီနိုမှာ 60 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
130 အခမဲ့ Kolikkopelit ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
55 အခမဲ့သကြားကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
အပိုကာစီနိုမှာ 160 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
2 ဗင်းနစ်ကာစီနို - ကာစီနို LIDO
3 ဗင်းနစ်ကာစီနို -, CA '' VENDRAMIN CALERGI
4 ဗင်းနစ်ကာစီနို -, CA '' NOGHERA
6 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးဥရောပအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2018:
7 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2019: